मानिसहरू त यौन सम्बन्धलाई मायाको उच्चतम सम्बन्ध भन्छन् । मैले त विवाह भएपछिको बीचको २/३ महिनालाई छोडेर हरेक यौन सम्बन्धलाई यातना सम्झेर सहेकीे छु । पछिल्लो तीन वर्षयता त हरेक हप्ता ३/४ पल्ट बलात्कृत भइरहेकी छु । त्यसो त वैवाहिक बलात्कार र यसको कानुनी उपचारको बारेमा पढेकी पनि छु । कामको सिलसिलामा फिल्डमा जाँदा अरूलाई सम्झाउँछु पनि । तर भन्छन् नि, पण्डित्याइँ अरूलाई सुनाउन मात्र काम लाग्छ रे न कि आफूलाई परिआउँदा । माइतीतिर भन्यो भने, ‘घर खान सकिन’ भनेर उल्टै पीर मान्नुहुन्छ, यतातिर आफ्नो मर्का बुझिदिने कोही छैन । कसलाई भन्ने ? माइतीको इज्जत, घरको इज्जत भन्दाभन्दै जिन्दगी जान्छजस्तो लाग्छ । समाजको डर नै गहिरो भएपछि कानुनी अधिकारले मात्र केही नहुने रहेछ । जबसम्म समाजले महिलालाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण बदलिँदैन नि तबसम्म कानुनी उपचारले पनि समस्याको समाधान दिनुको साटो झनै समस्या थपिदिन्छ,’ उनको कुरा ।
त्यस्तै अफिसमै काम गर्ने तिनै आफन्तको व्यवहार पनि बदलिएको पाइन् रे । भाउजूले पनि यही अफिसमा नै काम सुरु गर्नुस्, अब पहिले जस्तो हुँदैन भन्दै थिए रे । ‘अब पीडित महिलाहरू पनि बोल्न थालेकाले कतै यिनीहरू पनि बोलिदिए भने हामीलाई त गाह्रो हुन्छ भन्ने महसुुस गरेर नै उनीहरू हच्किएका हुन् ।’— चन्द्रिकाको भनाइ छ । उनको लोग्नेमा पनि परिवर्तन आउँछ भन्नेमा उनी आशावादी छन् । त्यस्तै मनीषाले ‘संसार देखेर पछुतो लाग्यो होला नि उसलाई पनि’ भन्नुले पनि परिवर्तनको उज्यालो इंगित गर्छ ।
यसले बिस्तारै न्यानो घाम उदाउँदै गरेको संकेत गर्छ । पक्कै पनि त्यो घाम कुनै एक लिंगको लागि मात्र भने अवश्य होइन । प्रकाशित : माघ ५, २०७५ ११:५९
माघ ५, २०७५ श्रीधर पौडेल
काठमाडौँ — युरोप गएको छोरो चिसो हिउाको फोटो ट्याग गर्छ आमालाईकार्डको चक्करमा वर्षौअघि काख छाडेरअघिल्लो महिना झुलुक्क एक साताका लागि फर्कंदा
युरोप गएको छोरो
चिसो हिउाको फोटो ट्याग गर्छ आमालाई
कार्डको चक्करमा वर्षौअघि काख छाडेर
अघिल्लो महिना झुलुक्क एक साताका लागि फर्कंदा
उसैले खोलिदिएको फेसबुक एकाउन्टमा
आमा हेर्छिन् त्यही फोटो
मध्यपुसको एक सााझ
अगेनाको रसेटो छेउमा
चिसो मन लिएर आाखा चिम्म पार्दै
दुई थोपा आासु
भरभराउादो कोइलामा परेर
मिसिएर धूवाासागै आासुको बाफ
मोबाइलमा नोटिफिकेसनको अर्को ट्युन बज्छ
आासुले पिरो आाखा झिमझिम पार्दै
क्लिक गर्छिन् औंलाले
ज्वाइँलाई डीभी परेर पाताल भासिएकी छोरी
उसैगरी सेताम्मे हिउामा
खेलिरहेकी नातिनीसँग !
ओदानमा बसालेको कुाडेबाट
र, उड्छ, धूवाामा मिसिएको बाफ
मिसिन्छ त्यही दलिनको कसमा
जहाा यी सन्तानको चिसो भगाउन तेल माड्दा
हातबाट निस्किएको ममताको बाफ
यसैगरी टाासिएको थियो ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७५ ११:५७